Fanomezana elefanta fotsy 15 tsara indrindra (na Yankee Swap) ambanin'ny $ 20 - An-Trano
Indian Teknolojia Beauty Bridal Fahalalana & Fanabeazana Gynaec Ny Adin-Tsaina Fahasalamana Fitaizana Fitaovana Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy
Ny tsara indrindra Yankee Swap na fanomezana elefanta fotsy azo antoka hampiaiky volana ny olona rehetra
'Fotoana fanomezana fanomezana fialantsasatra izao! Ary inona no karazana fanomezana fanomezana fialantsasatra tsara indrindra? Elefanta fotsy, mazava ho azy! (Aza @ anay.)
Raha sanatria tsy hainao ny fiheverana (scrooge ianao!), Avelao izahay hanome anao ny fotony. Ny mpandray anjara tsirairay avy dia mitondra fanomezana fonosina ary hametraka azy am-panafahana ao anaty antontany, ka tsy misy mahalala hoe iza no nitondra. Samy manisa isa ny tsirairay hamaritana ny fotoana hividianan'ny mpanatrika lanonana fanomezana iray. Misafidy fanomezana ny olona voalohany, manokatra azy ary mampiseho azy ho hitan'ny rehetra. Ny olona manaraka dia manana safidy: mangalatra io fanomezana io na misafidy fanomezana vaovao hosokafana. Arakaraky ny habetsaky ny isa no hofidinao, dia arakaraka ny habetsaky ny safidinao no esorina.
Na antsoinao hoe Elefanta fotsy, Yankee Swap na Dirty Santa dia mitovy ny tanjona: ny mitondra any an-trano ny fanomezana tsara indrindra. Ary miaraka amin'ny teti-bola kely amin'ny ankapobeny dia tsy izany no mora mora indrindra. Amin'ity taona ity, ho mpandresy mazava amin'ny mitondra ny fanomezana izay iadian'ny tsirairay mba hahazoany tanana. Ary raha entinao mody any amin'ny farany ny fanomezana anao? Eny, avy eo nilalao azy tsara ianao.
Izay aficionado elefanta fotsy manaja tena dia mahalala fa arakaraky ny maha-manjavozavo ireo fanomezana, no vao mainka mahafinaritra ny lalao. Ka noho izany ao an-tsaina dia jereo ny fakana sary azo antoka amin'ny fotoana ilainay amin'ny filan'ny fetinao.
coco diloilo hatao volo very
Mifandraika: Fanomezana latsaky ny $ 25 ho an'ny Maherifo isan'andro eo amin'ny fiainanao
1. Telefaona Vaovao, Iza no Dis? Lalao Party
Raha misy ao anatin'ny lahatsoratranao ny Cards Against Humanity dia hanana izany ianao — ny lalao fety ankafizinao vaovao. Hifandimby ho mpitsara ny mpilalao amin'ny alàlan'ny fanaovana karatra boaty inbox fa ny olon-drehetra kosa manandrana mampifangaro azy amin'ilay karatra 'valiny' mahafinaritra indrindra. Ny tsy fitoviana - ary fotoana maro tsy mahazo aina - tsy maintsy ihodivirana.
Vidio io ($ 20)
Fandroana fandroana & ankoatr'izay
2. Glass vera tavoahangy
Afaka nampiasa ny iray tamin'izy ireo indray mandeha (na indray mandeha isan-kerinandro) isika rehetra.
Vidio io ($ 10)
Ity fantsom-pandresena manidina 18-inch ity dia manome ny fanampiana tonga lafatra amin'ny latabatra tsy misy olona, ​​izay indrindra no mahatonga azy ho fanomezana elefanta fotsy mety.
Vidio io (9 $)
4. birao birao nomeplate
Midika izany ... marina izany.
Vidio io (15 $)
5. Vacuum kely indrindra eto an-tany
Raha vao jerena, ity banga kely bitika ity dia toa sangisangy be. Saingy rehefa tsapan'izy ireo fa mpihinana latabatra be korontana ianao, dia ho azy ireo ny vazivazy. (Ary ireo potipotehina marobe volana izay nopetahana tamin'ny klavinao.)
karazana haircuts isan-karazany ho an'ny vehivavy
6. Mpisokatra tavoahangy divay elektrika
Tsy ilaina? Angamba. Fipoahana tanteraka azo ampiasaina? Tanteraka.
Up ny lalao dimy ambony an'ny olona miaraka amin'ny fipoahana glitter sy confetti. Avy eo miantso ny mpandray ilay mpanadio banga kely hanadio ny korontana!
8. Avocado Toast Krismasy Ornament
Ampahatsiahivo ny Arivo Taona amin'ny fiainanao tao amin'ny trano azon'izy ireo novidiana raha tsy noho ireo safidin'ny sakafo maraina fatra-pitia * ireo.
* mandripaka trosan'ny fampindramambola ho an'ny mpianatra, tsy fahombiazan'ny kapitalisma amin'ny andro ankehitriny.
9. Lokon'ny boky sticker
Ho an'ireo izay tia hetsika kanto toa an'i David Bowie.
10. Dadabe Noely's Cookies
Tsy mety diso amin'ny kaikitry ny gingerbread fotsy mifono sôkôla.
11. Apetaka naoty matevina
Hanampy azy hitazona ny filaminany amin'ny taona vaovao.
Vidio io ($ 12)
fanatanjahan-tena tsara indrindra hampihenana ny tavy vavony
12. Tsinontsinona Royal Deluxe Emoji
Tsipy tsipelina somary marefo ara-potoana ve raha amin'ny toetr'andro ririnina? Mandrakizay! Volavola emoji mavo mamiratra ary loza mety hitranga? Ho an'ny elefanta fotsy ihany.
13. Saron-tava Oxygenating Deep Cleanse
Matetika ny marika buzzy dia tsy misy vidiny akory, fa ity sarontava sarom-bolo ity dia mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna.
14. Kaosy ba kiraro
Tena tsy ho voky mihitsy ianao.
Vidio io ($ 13)
15. Lalao latabatra fisotroana fisorohana tri-morontsiraka bingo
Satria mila zavatra hamelombelona ny fety ianao rehefa vita ny fialamboly elefanta fotsy.
Tatitra fanampiny nataon'i Emily Brozyna.
Sokajy Fanafody An-Trano Manjamaso Teknolojia
sarimihetsika fitiavana anglisy tsara indrindra
toro-hevitra momba ny hatsaran-tarehy ao an-trano amin'ny hoditra mamirapiratra
sarimihetsika tantara an-tsehatra sy tantaram-pitiavana
lisitry ny sarimihetsika ho an'ny fianakaviana 2019
tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny diabe maraina
anna kournikova sy enrique